7 SEO Key Strategies Iwe Unofanirwa Kuve Unotumira muna 2016 | Martech Zone
Makore mashoma apfuura, ini ndakanyora izvo SEO yakanga yafa. Musoro wacho wanga uri pamusoro pamusoro, asi ini ndinomira nezviri mukati. Google yaive ichikurumidza kubata neindasitiri yaive inotsvaga injini dzekutsvaga uye zvichikonzera iwo mhando dzeinjini dzekutsvaga dzichidonha zvakanyanya. Vakaburitsa akateedzana maalgorithms ayo aisangoita chete kuti zviome kushandisa ekutsvagisa masosi, vakatoviga avo vavakawana vachiita blackhat SEO.
Izvi hazvireve kuti saiti haifanire kukwidziridzwa pakutsvaga kwehupenyu. Ingori izvo SEO nyanzvi dzaive dzakadzora hunyanzvi hwavo kudzosera kumashure uye chinzvimbo vakazviwana vasisipo pabasa. Tsvaga nyanzvi senge agency yedu akafanotaura shanduko uye akayambira vatengi vedu nezvekubiridzira, uye ikozvino mafemu edu ari kuita mushe. Asi maitiro edu mazhinji-chiteshi uye haana kunyatso tarisa pakutsvaga pachako. Isu tinoziva mashandiro anoita ecosystem yemadhijitari masvikiro ese anotsigirana.
Kwakave nemazuva apo SEO yaive ichiri nezve nezve kungotarisa pane akakosha mazwi, backlinks uye peji 1 masosi. Majini ekutsvaga ari kuwedzera kungwara, ndomaitirwo anoitwa nemutungamiri weindasitiri, David Amerland, uye vari kuita zvirinani mukunzwisisa zvimwe chinangwa chevashandisi uye nemabatiro avanogona kuita zvine chinangwa. Zvakadaro, kungoisa saiti yako nezvinyorwa uye akanaka magiraidhi haazozvigure kunze kwekunge iwe uchidzidza zvakawanda nezve aya marongero uye uve nani muSEO re2016. Jomer Gregorio, Kushambadzira Dhijitari Philippines
Kana iwe uri mushambadzi wedhijitari uye uchida kuve nani paSEO, iyi infographic kubva kuna Jomer inorova pane ese akakosha zvinhu mune yanhasi yekutsvaga injini optimization. Heano matanho manomwe anokosha e7 SEO:
Nzwisisa Zvikuru uye Zvisina Kukosha Zvakakosha Zvinzvimbo zvegore ra2016 - Maererano ne Moz, mobile-hushamwari, kukosha kunoonekwa, data rekushandisa, kuverenga, uye dhizaini pamusoro pechinyorwa. Zvinobhadharwa zvinongedzo uye anchor zvinyorwa zvadonha mukukanganisa (uye akabhadharwa ma link anogona kutokanganisa rako rechiratidzo)
Gadzirira Kutsvaga Kwenhare - Kutsvaga kwenhare kwakawedzera 43% YoY, iine 70% yekutsvaga kwenhare kunotungamira kune chiito mukati meawa.
Tarisa pane Mushandisi Chinangwa - Panzvimbo pemashoko akakosha, funga nezve akakodzera marefu-muswe makiyi uye akazara misoro. Majini ekutsvaga akachinja kuti unzwisise chinangwa chevashandisi, kuti ugone kunyora zvimwe zvirimo zvemukati zviri kuita kune vanotarisira uye nevaverengi.
Kuenda Kwenharaunda ichiri nzira yakanaka yekuenda - Hafu yevashanyi vechitoro chepamhepo vanoenda kunoshanyira kuchitoro mukati mezuva. Ita shuwa kuti wakanyorwa nenzira kwayo muBing, Google, uye Yahoo! kutsvaga kwebhizinesi nemeseji inowirirana mukati.
Yakareba Izvo Zvirinani - Regedza kuburitsa isingagumi yekugadzira tambo yezvirimwa zvegreen uye investa premier, inodzidzisa uye yakawanda-midhiya zvemukati zvinopa iyo yakanakisa ruzivo online pane chaiwo nhaurwa.
Kuchengetedzwa kweSiti uye SEO - Kufambisa saiti yako kune yakachengeteka kubatana (sezvatakaita), inogona kukupa iwe iyo Edge yauri kutsvaga pamusoro pevanokwikwidza. Kufamba kwakasimba kana iwe uchiunganidza chero mhando re data chero zvaro.
Ita Kuti Zvemukati Zvitsvage kuburikidza neIzwi - Apple Siri, Google Zvino neMicrosoft Cortana zvese zvinobatsira zvinechinhu chimwe kugona kugona kutsvaga ruzivo paInternet. Pamwe pamwe nezvakareba zvemukati, zvinyorwa zvizere zvinokwanisa kukupa iwe mukana wakawanda mukutsvaga kwezwi pane zviri pasi pehunhu hwegreen girini.
Heano 2016 XNUMX Strategic Infographic
Tags: 2016Backlinksurefu hwemukatidigital kushambadzira PhilippinesGraphicshttpszvakakosha chinzvimbo zvinhujomer gregorioKeyword stuffingmazwi akadzamayemuno seomobile searchmobile search optimizationchinzvimbo zvinhukueraSearch Engine Optimizationseoizvo algorithmsseo yakafaseo chinzvimbo zvinhurankingsSsluser intentizwi kutsvaga